China Inotakurika Inodzora Inodzora Mwenje fekitori uye vagadziri | Meiling
Yema fashoni uye inoshanda, yakanakira kushandiswa panguva yekuvaraidza. Kutengesa USB, kunogona kushandiswa chero kupi zvako kwaunoda. Nemvura inodzinga, yakasikwa yakachengeteka uye inoshanda, inokodzera kushandiswa kwaamai nekubereka. Kunodziya husiku husiku mwenje, unodziya uye wakasununguka. 10 maawa nguva yekumisikidza. Zvinonyatso dzinga umhutu nekugadzira 30m2 indoor kana 3 metres yekunze nzvimbo yekudzivirira.
Kukura kwechigadzirwa 77 * 76 * 138mm
Dare rekutonga Bata kutonga (10-awa nguva yekumisikidza)
Nzvimbo Yekushandisa 30m2 (mukati), 3m (panze)
Kavha divi 515X415X415mm（40PCS / katoni)
1. Yemafashoni uye inoshanda, yakanakira kushandiswa uku uchivaraidza.
Push-bhatani kutanga kwemushandisi nyore. Kubhadharisa USB, kunogona kushandiswa chero kwaunoda.Nemvura inodzinga, yakasikwa yakachengeteka uye inoshanda, inokodzera kushandiswa kwemadzimai uye kwe fetus. Warm nyoro husiku mwenje, inodziya uye yakasununguka. Maawa gumi nguva yekumisikidza. Unobudirira kudzosera umhutu nekugadzira 30m2 indoor kana 3 metres yekunze nzvimbo yekudzivirira.
2. Easy oparesheni
Dzvanya simba uye bhatani rinovhenekera mwenje wegirini kubatidza iyo isinga ponese mweya-unodzivirira umhutu. Otomatiki shutdown mushure maawa gumi.
3. Unodzinga umhutu zvinobudirira
Kugadzira 30m2 indoor kana 3 metres yekunze nzvimbo yekudzivirira, yakakwana yekuvaraidza pane indoor nzvimbo uye kunze kwemusuwo nzvimbo senge lawn, vharanda, patio, dziva kana deck; tekinoroji yakavhenekerwa inoshandiswa kurwisa umhutu munzvimbo dzakaomesesa pasi pano; inopa maawa gumi ekudzivirira.
4. Stylish, nyore, inotakurika
Mwenje unovimbwa unodzora mwenje ndicho chipo chakanakira muridzi wemba nyowani, mugashiri, akasiya basa, koreji akapedza kudzidza, murimi webindu kana muchengeti.
5. 100% yakachengeteka kuvanhu & zvipfuwo
Rambi rinodzinga tupukanana rakachengeteka kumukadzi ane nhumbu nemwana. Hapana chepfu, hapana chepfu, hapana radiation, uye hapana chikonzero chekuchenesa zvipembenene zvakafa, hapana bhatiri rinodiwa uye rinodhura magetsi mashoma. Inokupa 100% chengetedzo uye eco-yakanaka imba.
Pashure: Nguo Steamer
Zvadaro: Mini Inotakurika Mhepo Inotonhorera
Tupukanana Dzinga Rambi
Mosquito Dzinga Rambi
Mosquito Dzinga Mafuta Lamp